The Ab Presents Nepal » Breaking News – कञ्चनपुर निर्मला पन्तको अपराधी दिलिपसिंह विष्ट नै !
Breaking News – कञ्चनपुर निर्मला पन्तको अपराधी दिलिपसिंह विष्ट नै !
काठमाडौं -: कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया नि*र्मला पन्तले संसार छाडेको एक वर्ष पुग्दासमेत अप*राधी पत्ता नलागेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहँदा सो घ*टनाको अनुसन्धान गर्ने सिआइबीका डिएसपी अंगुर जिसीले अप*राधी पत्ता लागेको दोहोर्याएका छन् । भिआइी अपराधी जोगाउन मानसिक रोगी दिलिपसिंह विष्टलाई फसाउन अंगुर जिसीले भूमिका निर्वाह गरेको भनेर उनलाई नेपाल प्रहरीले अहिले निलम्वन गरेको छ । तर उनले अहिले पनि दिलिपसिं विष्ट नै अप*राधी रहेको दावी गरेका छन् ।
उनले घटना, दिलिपसिंह विष्ट, डिएनए र भ्रमका विषयमा विस्तृत रुपमा यसरी वर्णन गरेका छन् । निर्म*लाको डिएनए आमासँग मिल्यो । भेजिनल स्वावको नमुनाबाट निकालिएको डिएनए र दिलिपबीच मिलेन । के यो विधि सर्वस्वीकार्य सतप्रतिशत विश्वसनीय विधि हो ? मेरो प्रश्न यो हो । यो प्रश्न सुन्न कोही तयार थिएनन् । तर मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको डिएनए विज्ञहरुले मेरो प्रश्न सुन्न तयार भए । उहाँहरुले गरिँदै आएको डिएनए विधि गलत भएको ठहर गर्नुभयो । वंशज पहिचान गर्ने डिएनए परीक्षण गरिएको त अहिले आएर पुष्टि भयो । आयोगले त्यही भन्यो । व्यक्ति पहिचान गर्न नसकिने डिएनए परीक्षण गरिँदै आइएछ ।
खासमा पछिल्ला समितिहरुले टर्चर दिन थालेछन् । भिआइपी जोगाउन अंगुर जिसीले सर्टको खल्ती च्यातेर राखेको भन् भन्दै ती हवल्दारलाई करकापमा पारेछन् । ऊ आफै दुर्घ*टनामा परेर दाँतमा स्टीर राखेर भोलिपल्ट डाक्टरलाई भेट्न जानु पर्ने अवस्थामा रहेछन् । के भन्दा मलाई छाड्ने हो ? भनेर उसले सोध्दा छानविन समितिका सदस्यहरुले प्रायोजित घ*टना हो भनेर स्वीकार गर भनेछन् । अनि उसले सर्टको खल्ती आफैंले च्यातेर राखेको भनेछन् ।
तर रिपोर्टमा डिएसपीले भनेर यसो गरेको भनेर आएछ ।त्यस्तो बयान दिने हवल्दारले पनि मसँग माफी मागेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सर, मैले त जे जे कबोल गर्नुपर्ने हो त्यो सबै लेख्नुस । म सही गरिदिन्छु भनेँ । खल्ती म आफैले च्यातेको भनेर स्वीकार गरेको थिएँ । त्यहाँ हजुरको नाम कसरी मुछियो म छक्क परेँ ।’
यो घटना अनुसन्धान गर्नका लागि गठन भएका अन्य समितिहरु पनि यहि सिद्धान्तलाई मियो बनाएर अनुसन्धानमा केन्द्रीत भएका छन् । उहाँहरुले डिएनए नमिलेपछि सबैकुराहरु प्रायोजित हुन् भन्ने माइन्ड सेट गरेर केन्द्रीत हुनुभएको छ । डिएनए नमिलेका कारण खल्ती, विष्ट, उसको बयान झुठ वा प्रायोजित हुन् भन्ने सिद्धान्तबाट पछिल्ला समितिहरुले आफ्नो प्रतिवेदन लेखे ।
तर रे* प र म* र्डर केसमा डिएनए परीक्षण भएको निर्म*लाको केसमा मात्रै हो । मैले शुरुदेखि नै भन्दै आएको यो हो कि डिएनए परीक्षण गर्ने पद्धति सहि छैन । अहिलेको डिएनए परीक्षण भनेको बाबु छोरा हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि गरिने पद्धती हो । यो निर्म*ला पन्त प्रकरणमा उपयुक्त छैन । मैले डिएनए परीक्षण कै प्रमाणिकता जाँच्नु पर्छ भनेँ । तर कसैले पत्याएन । अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फोरेन्सिक एक्स्पर्टहरुसहितको टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्यो कि यो डिएनए परीक्षण विधि ठीक छैन । डिएनएकै मात्र आधारमा अपराधी खोजिनु वा छाडिनु हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग पनि कन्भिन्स भयो ।